“သတင်းထောက်တစ်ဦး၏ မှတ်စု(၄) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » “သတင်းထောက်တစ်ဦး၏ မှတ်စု(၄)
love Reporter's Notebook
ကိုမြတ်ကျော်သူရေ… ဖတ်ရတာအရမ်းကောင်းတယ်ဗျာ ။ ဖတ်ရင်းနဲ့ ကိုယ်တိုင် သတင်းထောက်နေရာကို ရောက်သွားသလိုပါဘဲ ။ ကောင်မလေးက နားလည်မပေးပါလားလို့ လဲ ခံစားရတယ် ။ သတင်းထောက်အချင်းချင်းတွေ ဖလှယ်တဲ့ ရင်ခုန်သံတိုးတိုးလေးတွေကိုလဲ ဆက်ဖတ်နေမယ်ဗျို့ ..။
အိုင်အယ်လ်ဘီစီ က ဆိုပဲ ..ဖယားဖယား ….
အင် နာတို့ တောင်မသိလိုက်ဘူး။ILBC ကဗိုလ်မလေးကို မုန့် ကျွေးကြိုက်
( သတင်းကိုသတင်းထောက်ကသစ္စမဖောက်ရဘူး။ )
ပညာရှိသတိဖြစ်ခဲမို့ သတိပေးရခြင်းသာ ဖြစ်ပါကြောင်းးးးးးး
CJ ရူး ရူးနေသူများအတွက် တကယ့် ဗဟုသုတပါပဲဗျာ။ ရင်ကွဲခဲ့တဲ့သူကို အားနာလို့ ဖတ်လို့ကောင်းလိုက်တာပြောရမှာ တမျိုးကြီးပဲ..။ အားပေးသွားပါတယ်ဗျာ။
သံတွဲသား အသည်းကွဲသတင်းထောက်ကြီးရေ ဗယာကြော်ပါဗျို့ —-အဲလေ—-
(နောက်ရက်မှာတော့ အယ်ဒီတာနှင့်အဖွဲ့ကပျော်ပျော်ပါးပါးကြီးလက်မှတ်သွားထိုးပြီးတော့၊နောက်တစ်ခါမလုပ်တော့ပါဘူးပေါ့၊ ဒါပေမဲ့လုပ်တာပဲ)
ဆယ်တန်းပြီးတော့ journalist သင်တန်း မတက်ဖြစ်တာပဲ မှန်တယ်ပြောရမယ်..မွန်မွန်သာဆို အဲဒီလို အပင်ပန်းခံနိုင်ပါ့မလား မသိဘူး ..
ကိုမြတ်ကျော်သူရဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို ဆက်လက်စောင့်မျှော်နေပါကြောင်း…
အကောင်းဆုံးကတော့ …. မိန်းမယူပြီးမှ သတင်းထောက်လုပ်တာ အကောင်းဆုံးပဲ .. ဟိဟိ… ။
ပြောမယ့်သာပြောရတာ .. တခြား နိုင်ငံမှာတော့ သတင်းထောက်တွေရော ၊သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်တွေရော ၊ မီဒီယာရဲ့ အရေးပါမှုတွေရော … ဒီမှာ ထက်ပိုမယ်ထင်တယ်… ။ ဒီနိုင်ငံမှာ တချို့သော သတင်းထောက်တွေ သတင်းသွားယူရတာတောင် ကဒ်မကလို့ ဘာပဲပြပြ မျက်နှာငယ်ကြရတယ် ။ ဆက်လက်ဗရက်တီလိုဟာမျိုးနားကပ်ပြီး သူမဖြေချင်တာမျိုး မေးလိုက်မိရင် .. ပါးရိုက်ခံရတဲ့ သာဓကကလည်း ရှိသေးတယ်လေ ။ ဒီတော့ ….. သတင်းထောက်ဆိုတာ အတော်ကြီး ၀ါသနာပါမှ ဖြစ်တဲ့ အလုပ်မျိုးပါပဲ … ။ လူရော စိတ်ရော နှစ်ပြီး လုပ်ရတာမျိုးကြောင့်လေ … ။
ဒါပေမယ့်လည်း … ယနေ့ခေတ်မှာ လေသံကြား ဖမ်းတရား နာချင်တဲ့ သတင်းထောက်တွေလည်း ဒုနဲ့ဒေးပေါ်ပေါက်နေပါတယ် သတင်း အနံ့ ရတာနဲ့ …. အင်တာနက်ထဲ ဖလပ်ဖလပ်ဆိုတက်ရှာပြီး ကောက်ပရင့်လိုက်တာပဲ ….. ။ သတင်းထောက်စိတ်သာ တကယ်ရှိလျှင် … အဲ့လို လက်လွတ်စံပယ်မလုပ်သင့်ဘူး ။
ဟိုးတလောက ကျွန်မဆီတွေရောနှောတဲ့အကြောင်းရေးတယ် … ။ အဲ့ဒီပို့စ်ထဲမှာတင် တရုတ်က မြောင်းထဲက ဆီထုတ်တဲ့အကြောင်း ကျွန်မအီးမေးလ်မှာ နှစ်ပေါက်လောက်တဲ့ အချိန်က ရခဲ့ဖူးတာလေးပါ ပြန်ချရေးပြီး လင့်ပါတင်ရေးပေးတယ် …. မကြာလိုက်ပါဘူး … ဂျာနယ် တချို့မှာ တရုတ်နိုင်ငံက ဆီပုံတွေပါလာလိုလာ … မြန်မာနိုင်ငံထဲက ဆီတွေက တရုတ်ကလာတဲ့ ဟိုဆီတွေ ဖြစ်လိုဖြစ်နဲ့ .. အိမ်မှာ ထိုင်နေတဲ့လူကြီး သူမတွေနားထဲ အထိေ၇ာက်သွားတဲ့ အဖြစ်ပါပဲ … ။
တကယ်ဆို ရယ်ချင်ပါတယ် ။ တရုတ်မှာ မြောင်းထဲက ဆီတွေထုတ်တဲ့အကြောင်း ရထားတဲ့ အီးမေးလ်တောင် တနှစ်ကျော်နေပါပြီ အခုမှ အဲ့ဒီပုံနဲ့စာတွေကို ကိုးကားပြီး ဂျာနယ်တချို့မှာ ထည့်ရေးတာ … တရေးနိုးလာတာများလားလို့ … သိချင်စိတ်ဖြစ်မိပါတယ် အင်တာနက်ထဲက သတင်းတွေကို စီစစ်မှု မရှိပဲ ကူးတင်ပလိုက်တဲ့ အဖြစ်ပျက်တစ်ခုခု မှတ်မှတ်ရရဖတ်ခဲ့ဖူးသေးတယ် ဂျာနယ်ကိုတော့ နာမည်တပ်မပြောချင်ပါဘူး …. ပြည်တွင်းဂျာနယ်တစ်ခုမှာပါ … ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းမပါတဲ့ လူသားလေ … ကိုယ်တပိုင်းကြီးပဲ ဆက်နေတာ ကျင်ငယ်၊ကြီးစွန့်လျှင် ကျန်တဲ့ ခန္ဓာတပိုင်းက ပါးစပ်က စွန့်ရတယ် … ဂျာနယ်ထဲမှာတော့ ကံကံဧ။် အကျိုး ဘာညာစသဖြင့် ပွားတယ်ပေါ့ .. နောက်မှ သိလိုက်တာ .. အင်တာနက်ထဲက … Hoax ပါတဲ့ .. ဟိဟိ …
တကယ့်သတင်းထောက်တွေကိုတော့ လေးစားပါတယ် … ဒီကြားထဲမှာ သတင်းဖြစ်လျှင် ပြီးရောဆိုပြီးတင်နေတဲ့ …. စုန်းပြူးတွေလည်း ကြားညှပ်ပါနေတယ်ဆိုတာလေး သိစေချင်လို့ပါ ။
ကျွန်မအစ်ကိုလည်း ပြည်တွင်းဂျာနယ်နဲ့ မဂ္ဂဇင်း တချို့မှာ ရေးနေတဲ့ သတင်းထောက်ပါပဲ … ။ အ လုပ်နဲ့ ပတ်သတ်လို့ သူ့ကျန်းမာရေးအတွက် မိသားစုတွင်း ခဏခဏ စကားများရတယ် ၊ မိန်းမနဲ့ခဏခဏ ကွိုင်ပတ်ရတယ် …. ။ ဒါပေမယ့်လည်း … ၀ါသနာအရလုပ်တဲ့ သူ့အလုပ် … ဘယ်တော့မှ … ချမ်းသာတယ်ကို မရှိတာ မျက်မြင်ပါပဲ … ။
ုဟုတ်ပါ့ အစ်မရယ်..မွန်မွန်လည်း ထူးဆန်းနေတာ (ကိုထူးဆန်း မဟုတ်)။ အခုမှ ဒီကိစ္စက ဂျာနယ်ထဲမှာ ခေတ်စားလာတာပါလိမ့်လို့… တစ်ခါတစ်လေ မေးလ်ကရတာတွေကို ဂျာနယ်ထဲမှာ ထည့်တာ တွေ့မိတယ်… ဒီတစ်ခါတော့ အသေအချာ မှတ်ထားတော့မယ်… ပြီးရင် ပြန်ဖွမယ်…
ဟုတ်ပါတယ်..etone ရေ…အဲဒီလို သတင်းထောက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်…
ဟုတ်ကဲ့ ကိုမြတ်ကျော်သူရေ ..အားပေးလို့ စောင့်ဖတ်နေပါတယ် ။